सरकार जनतामा उत्साह भर्ने गरि नयाँ रुपमा अघि बढ्नुपर्छ : नेता पौडेल (भिडियो)
महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टीको बिधि हो
२०७७ भदौ ९ मंगलबार १०:१२:००
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद कार्यदलको सुझाव र त्यसको अनुमोदनसंगै मत्थर हुने क्रममा छ । मंसीर ४ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिकै पुनर्परिभाषाजस्तै लाग्ने कार्यदलको सुझावमा संघीय मन्त्रीमण्डल र प्रदेश सरकार हेरफेर गर्न सकिने नयाँ विकल्प औंल्याइएको छ । दुई अध्यक्षको सहमतिमै पार्टी अघि बढ्नुपर्ने एकतादेखिकै बाध्यात्मक ब्यवस्थाका कारण दुई अध्यक्ष मिल्दा अरु विषय पाखा लाग्ने यसपटक पनि सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीकै प्रस्ताव अनुसार कार्यदलले मन्त्रीमण्डल हेरफेरको सुझाव दिएकाले अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ताको ध्यान त्यतातिर मोडिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले ओली नेतृत्वमै सरकारको निरन्तरताको वकालत गर्दै आएका मध्यमार्गी नेता तथा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ टिभी अन्नपूर्णका लागि राजु सुवेदीले नेता पौडेलसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपा भित्रको जारी विवादलाई अन्त्य गर्ने गरि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । के यसको अर्थ नेकपा भित्रको विवाद अन्त्य भएको हो ?
हो पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको अन्तरविरोध अहिले तत्कालको निम्ति देखा परेको समस्या थियो । अब तत्कालका लागि यो विवादको अन्त्य भएको छ । दुबै अध्यक्षलाई मान्य हुनेगरी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसको स्वामित्व लिन चाहिं बाँकी नै छ । अब सचिवालय वा स्थायी समितिमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत भैसकेपछि यसको स्वामित्व लिने कुरा रहनेछ । अब हामी यो कुरामा निश्चित भएका छौं कि तत्कालको निम्ति पार्टी टुटफुट वा बिभाजनको खतराबाट बचेको छ । आम नेता कार्यकर्तासँगै म व्यक्तिगत रुपमा खुशी छु,किनभने हामीले हिजो अध्यक्षद्वयलाई कुनै पनि हालतमा नेकपा नफुटोस् भनेर दिएको सुझाव मनन गरिएको छ । हाम्रो त्यही सुझाव अहिले कहिँ न कहिँ कार्यदलमा आएर अभिव्यक्त भयो । कार्यदलले सर्वसम्मतिले दुबैजना अध्यक्षलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि अहिलेको संकटको अबस्था सिफ्ट भएको छ ।
अध्यक्षद्वयबिच केहि कुरा मिलेन विवाद सृजना भयो । उहाँहरु मिल्नुभयो सबै कुरा मिल्यो । नेकपा एउटा पार्टी हो अथवा अध्यक्षद्वयले चलाएको कम्पनी ?
यो कम्पनि चाहिँ होइन । यहाँले भनेजस्तै कतिपय समस्याहरु अहिले पनि छन् । हाम्रो विधानमा भएको ब्यबस्था अनुरुप अहिले पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव तयार पार्ने भनिएको छ । त्यसो भएर यसैलाई कम्पनि भन्न मिल्दैन । दुई अध्यक्षलाई हामीले गरेको बिशिष्ट अवस्थाको यहि व्यवस्था परिभाषा गर्दाखेरी उतिबैलै दुईवटा पाईलट पनि भनियो । यसलाई कसैले नकारात्मक चित्रण गर्ने गरेका छन् त कसैले सकारात्मक रुपमा पनि लिएका छन् । तर हामीले चाहिँ दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था , बिशिष्ट अबस्थामा दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको हुँदा हामीले ग¥यांै । त्यसो भएर अहिलेको संकटको सम्बोधन पनि दुई अध्यक्षले निकास दिनेगरी गर्नुपर्छ र झगडा मतभेद वा असहमति जे भएपनि अध्यक्षद्वय बीचमा भएर समस्या पैदा भएको हो । त्यसैले उहाँहरुले नै समाधान खोज्नु चाहिँ कम्पनी नभएर बिधानमा गरेको व्यवस्था अनुरुपको प्रणाली हो । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।
यद्यपी पार्टी भित्र विभिन्न संरचना छन् केन्द्रिय कमिटी छ ,स्थायी कमीटी छ, सचिवालय छ । तैपनि ठ्याक्कै अध्यक्षद्धयको सामान्य मतभेदमै पाटी विभाजनसम्मको कल्पना अनि दुईजना मिल्दा एकढिक्का बनिहाल्ने कारण चाहिँ के हो ?
मलाई सोध्नुहुन्छ भने ठिकै हो । अहिले कहाँ गएर केन्द्रिकरण गर्नुहुन्छ त ? अहिले हामीले भर्खरै महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिडको महामारीकै बीच ४ सय बढीको केन्द्रिय समितिको बैठक राख्न पनि सम्भव छैन । यद्यपी केन्द्रिय समितिका साथिहरुले आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रिय समितिको बैठक माग गर्नुभएको छ ,त्यो स्वागतयोग्य छ । तर फेरि पनि परिस्थितिले त हामीलाई त त्यहाँ पु¥याएको छैन । दुई अध्यक्षको बिचमा सहमति भयो भने त्यसलाई पार्टिमा औपचारिकता दिने काम चाहिँ सचिवालय वा स्थायी समितिले गर्छ । अनुमोदन चाहिँ आधिकारिक कमिटी सचिवालय,स्थायी कमिटी र केन्द्रिय समितिले दिइएको मान्यता अनुरुप दैनिकी कार्यसम्पादन गर्नलाई सचिवालय भनेर बनाइएको हो तर त्यहाँ प्रस्ताव लाने कुरा त दुईवटा अध्यक्षलाई दिनुको बिकल्प नै छैन हामी सँग । त्यसो भएर यो अहिलेको बिशिष्ट अबस्थामा बनाइएको प्रणाली हो । यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ ।
तपाईहरु स्थायी कमिटी बैठक सम्म त आउनुभयो । तर मात्रै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नुभयो अध्यक्षबाट राजिनामा माग्नुभयो । विवादको चुरो खोज्ने र समाधान गर्नेतर्फ त स्थायी कमिटीमा छलफल चलेन नि ?
विवादको कुरा कहाँ थियो भने जतिबेला पार्टी एकताको घोषणा गरेका थियौं । त्यतिबेलै केहि ठोस र मुर्तरुपमा कार्यविभाजन मिलाउनुस भनेर त्यतिबेलै भनेका थियौं हामीले । किनभने दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिसकेपछि दुईवटा अध्यक्षको पाँच वर्ष गर्ने कार्यबिधि विभाजन के हो ? कुन अध्यक्षले कुन भुमिका निर्वाह गर्ने ? भन्ने कुरा ठोस र मूर्त हुन सकेको थिएन । त्यहि कुरा बिचमा जिकज्याक भएको हो । को ठुलो ? को चाहिँ पहिलो अध्यक्ष ? के दोस्रो अध्यक्ष ? कुन चाहिँले मिटिङ चलाउने कसले नचलाउने ? सरकारको भुमिकामा कसरी केन्द्रीकृत हुने ? भन्ने कुरामा जिकज्याक –जिकज्याक हुँदा हुँदै बिवाद हुँदा हुँदै एकदम त्यो बिवादले त ठुलै प्रारुप लियो र सिंगो पार्टी नै प्रभावित बन्यो । त्यतिबेलै त्यो कुरा मिलाएको भए अहिले जुन कार्यदलले पेश गरेको छ । त्यो कुरा त्यतिबेलै मिलाएको भए हामी सकुशल लिकमा रेल हिँडेझैं हिडिरहन पाउँथ्यौं । त्यो मिलाउन नसक्दा समस्या पैदा भएको हो ।
अहिले कार्यदलले प्रस्तुत गरेको त्यस्तो के बिषय छ जसले यो बिवादलाई साम्य पार्यो ?
कार्यदलले पेश गरेको बिषय पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत भएर निर्णयार्थ वा कार्यन्वयन तहमा पुगिसकेको त छैन । पार्टीमा अफ्ठेरो परेको बिषय भनेको अलिकति शैलीगत कुरा थियो । त्यो कुरा करिब करिब पार्टी मा कतिपय निर्णयहरु गर्दा खेरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुले गर्नुभएको मैले बुझेको छु । दोस्रो चाहिँ दुई अध्यक्षको कार्यबिभाजन सरकारको काम कारबाही र भुमिकामा स्वतः प्रदान हुने कमरेड केपी शर्मा ओलीले त्यो भुमिकामा केन्द्रित रहने , प्रचण्डले सहयोग गर्ने ,र पार्टीमा चाहिँ प्रचण्ड बढि केन्द्रित हुने र अरु चाहिँ केपीजीले सहयोग गर्ने अनि अरु सिनियर नेताहरुले सहयोग गर्ने । साथै पार्टीलाई गतिशील बनाउने र सरकारलाई पनि गतिशील बनाउने भनेरै उहाँहरु बिचमा कार्यविभाजन प्रस्तावित भएको छ । साथै अहिलेको कोभिडको समस्या, सरकारको समिक्षा, बाढीपहिरो , सीमा समस्या,एमसीसी लगायतका कुरा समेत कार्यदलले पेश गरेको मैले बुझेको छु ।
गएको मंसिर ४ गते दुई अध्यक्षबीच एउटा सहमति भएको थियो नि , त्यो सहमति र अहिलेको सहमतिबीच के भिन्नता देख्नु भएको छ ?
विगतका सहमति बिकल्पमा भए । जस्तो जेठ २ गतेपनि निकै उल्लासपूर्ण बातावरणमा दुईजना अध्यक्षले सहमति गरेर हामी कसैसँग सल्लाह नगरीकन पछि जानकारी दिनुभयो । हामीले एकदम ठिक छ कमरेडहरु भनेर भन्यौं । अनि उहाँहरु मात्रै मिलेर गरेको निर्णय मात्रै पनि होइन । दुईजना साथिहरु पनि थिए । र चार जनाले बसेर सरकार र पार्टीको बारेमा यसरी दुईवटा पार्टी सहमति गरेर अगाडी जाने भनेर सहमति भयो र एक अर्कोले हस्ताक्षर गरेर गोजीमा हाल्नु भयो ,यो त हो । तर समयक्रममा त्यसको पालना चाहिं भएन । केहि साथिहरुले उहाँहरुले गरेको सहमति पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत गर्नु भएको छैन,हामी चिन्दैनौं पनि भन्नुभयो । हामीले के भन्यांै भने सहमति त हो गरेको , कसैले झुक्याएर , लुकाएर हस्ताक्षर गरेको होइन । दुबैतिरका पार्टी कमिटीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ । मंसिर ४ गते एक प्रकारले केपी ओलीजी स्वास्थ्यको प्रतिकुल अबस्थामा प्रचण्डले आफैं स्वविवेकले ल तपाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्दिनुभयो । पार्टीमा ठिक प्रकारको बातावरण बनोस भन्नका निम्ती । पछि प्रक्रियामा चित्त बुझेन । हो होइन हो होइन भन्दा भन्दै जिकज्याकमा गयो । त्यसकारणले अहिले यहाँ चारवटा कुरा अगाडि आएका छन् । यहाँले भनेको कुरामा चारवटा कुरा थिए । कि पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ दुईजना अध्यक्षदेखी हामी सबैले । कि नयाँ सहमति मान्नु प¥यो या पुरानो सहमति मान्नुप¥यो । यी भन्दा बाहेक त उपाय छैन । त्यसकारण अब नयाँ सहमति त्यो मंसिर ४ गतेको सहमति होइन ।
त्यो भन्दा अलिक फरक प्रकारको खासै त कहाँ भयो होला र ?
त्यो भन्दा अलिक फरक प्रकारको बहस भयो हाम्रो बिचमा । मंसिर ४ मा महाधिवेशनको प्रसंग थिएन । यो बिचमा हामीले केन्द्रिय समितिको बैठक बसायौ, त्यो बिचमा कोभिड थिएन । यो बिचमा चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानीको प्रस्ताव थिएन । बिषय थियो तर निर्णय गरेर हामीले अगाडी बढाउनु पर्ने बिषय थिएन । यी थुप्रै महत्वपूर्ण बिषय आएका छन् । अब त यी सबै बिषय छिचोलेर अगाडी बढ्नुपर्ने अबस्था भएको हुँदा मंसिर ४ कै वरीपरी हुँदा के नयाँ भयो र भनेर हामी भन्न सक्दैनौं ।
तर पार्टी एकतादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा जुन नजिर छ नि, सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने । के तपाई देख्नुहुन्छ,यो पछिल्लो पटक कार्यदलले पेश गरको प्रतिवेदन अनुसार अध्यक्षद्वय आफु एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ अथवा तपाईले त्यो दवाब दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ?
नगरेर हुन्छ ? हामीले पहिलो पुस्ताका उहाँहरुले नेपालको आन्दोलन र परिवर्तनको भुमिका निर्वाह गरेको हुँदा स–सम्मान उहाँहरुको हरेक कुरालाई मान्दै ग्रहण गर्दै स्विकार गर्दै आएका छौं । तर पार्टी एकता वचाउन उहाँहरुले मान्नु प¥यो नि नमानेर हुन्छ ? सिंङ्गै पार्टी, सशक्त पार्टी , शक्तिशाली पार्टी बनाएर दोस्रो पुस्तालाई तपाईहरुले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अनि मात्र इतिहासमा तपाईहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाको सफलता हुन्छ हामीले भनेका छौं । म सम्मानपुर्वक उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु ,अहिले गरेको निर्णय इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर पार्टीमा एउटा बातावरण चाहिँ उहाँहरुले बनाउनै पर्छ ।
हामी इमान्दारीताको कुरा गर्दैछौं । पार्टी भित्र एकखालको बहस उठिराख्यो के यो बिचमा । प्रधानमन्त्री ज्युले अध्यक्षबाट राजिनामा दिने अथवा अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजिनामा दिने भन्ने कुरापनि उठिराखेको थियो । तर यी बिषय छायाँमा परे अरु शक्ति बाँडफाँडका कुराहरु अरु पनि यो यो बुँदामा काम गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ वा छैन त्यो विस्तारै आउला । कार्यान्वयनको सवालमा तपाईलाई कुनै पनि शंका छैन यसको अर्थ ?
राजिनामाको प्रसंग पनि एकपछि अर्को बिषय तात्दातात्दै अभिब्यक्त भएको बिषय मात्रै हो । म स्थायी कमीटीको सदस्य हुँ र कमीटीको सदस्यको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबारे कुनै बुँदा कुनै पनि बैठकको एजेन्डा थिएन, होइन र छैन । सरकारको कामकारबाही र समिक्षाबारे भन्नेमा कतिपय कमरेडहरुले मौखिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले बाहिर अलि जनताको बिचमा आलोचना बढ्दै गएको हुँदाखेरी एक पद एक जिम्मेवारीको निति पालना गर्दै उहाँले रोजेर चाहिँ सकेसम्म सरकारबाट राजिनामा दिदाँ हुन्छ भन्नुभएको हो । एजेण्डामा प्रस्तावित छैन । र पछि छलफल गर्दै जाँदा एकाध साथिहरुले बाहिर बोल्दा वा के गर्दा दुईवटै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो होला, त्यो भनेको चाहिँ पार्टी फुटाउनु हो,त्यो सहि थिएन । दुईवटै पदबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउ भनेर भनेको भएपनि त्यो चाहिँ पार्टी फुटाउ भन्या हो त्यो । कार्यविभाजन एक प्रकारले सहि छ । एक पद एक जिम्मेवारी । दुईजना अध्यक्ष बिचको योगदान ठोस गरौं । पार्टीलाई जोगाउँ, पार्टीलाई बचाउँ । सरकारको आलोचनालाई ग्रहण गरौं, गरेका राम्रा कामलाई पार्टी पुरै मिलेर प्रचार गरौं । त्यो पो गर्नुपर्ने हो त अहिले । त्यसकारणले तँ हट म हट भनेर त कहाँ सम्भव छ र अहिले । त्यसकारणले हामीले अहिले महाधिवेशन तिर लैजान खोज्यौं । त्यहाँ कार्यकर्ताले हाम्रो विगत के हो पृष्ठभूमि के हो , इतिहास के हो साथिहरु बिच राखौं,त्यसपछि उनिहरुले फैसला गर्छन् । अहिले महाधिवेशनसम्म जानको निम्ती सहमति खोजौं । सम्झौता भनेको एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्वलाई सहजतापुर्वक ग्रहण गरेर न सम्झौता हुन्छ । एकजनाले मात्रै गरेर कहाँ सम्झौता हुन्छ र ? यो बिचमा अलि लडाई जस्तो संघर्ष जस्तो भयो एकले अर्कोलाई केहि गर्न सकिन्छ की भनेर तनाकतुनुक पनि गर्नुभयो, उहाँहरुले । विभिन्न प्रकारका भेला गुटबन्दी पनि गर्नुभयो । तर बुझ्नुभयो भने एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको अस्तित्व लाई स्विकार नगर्ने हो भने यो पार्टीलाई एकिकृत राख्न सकिंदैन, सरकार चलाउन पनि सकिंदैन । त्यसपछि गएर जनताले दिएको भावनाको सम्बोधन पनि गर्न सकिंदैन, त्यसकारण मिल्नुको बिकल्प छैन । मिल्नु भनेको सहमति हुनु हो । सहमतिको बिन्दु कसरी खोज्ने भन्दा कार्यलदलाई चाहिँ ल ल्याउनु त बिषय के हो ? भनेर बिषय दिनुभयो । अब आएको छ त्यो वरीपरी काँटछाट गरेर थपघट गरेर मिलाएर सम्झौता हुन्छ । र हामी अगाडि बढ्छौं ।
पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलि नै पार्टीमा देखिएका विवादको खास चुृरो जस्तै गरि प्रचार भयो । तपाई नेकपाको प्रभावशाली नेता साथै पछिल्लो विवादमा मध्यमार्गीको भूमिका पनि खेल्नुभयो । सरकारका कामकारबाहीबारे तपाईको बुझाई के हो ?
मध्यमार्ग हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, यहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो । तर यतिबेला आम जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने छ । मैले जिल्लामा पनि २१ वटा साना तिना भेला गरेर आएर दुबै अध्यक्षलाई भनें, एकजना पार्टी सदस्य पनि पार्टी फुटोस् भन्ने पक्षमा छैन । तपाईंहरुले जनताको निम्ती यो पार्टी बनाउनु भएको हो भने जनता कोहिपनि र कार्यकर्ता कोहिपनि फुटको पक्षमा छैनन्,यो कुरा सुन्नुस भनेर मैले भनें । त्यसकारण हामीले त्यो भुमिका निर्वाह ग¥यौं । सरकारको कुरा चाहिँ सापेक्ष, जे हो त्यो भन्नुपर्दछ । सरकारले काम नै केहि गरेको छैन,खाली भ्रष्ट्राचार मात्रै गरेको छ, मन्त्रीको काम नै केहि छैन भनेर बिरोध गर्ने शैलिमा एकथरिले सामाजिक संजालमा,कतिपय मिडियामा पुर्वाग्रह राखेको पनि पाइन्छ । अर्को थरीले चाहिँ भयानक काम भयो पनि भन्नुहुन्छ । मेरो बुझाईमा यो दुईवटै अतिवाद हो । हो सरकारले यसबीचमा केहि काम गरेको पनि छ । तर हुदाँहुदै पनि जनताले आलोचना गरेका छन्,अपुग भयो भनेर । यो आलोचना जनताको माया हो । दुई तिहाईको सरकारले अझै राम्रो काम गरोस् भनेर आलोचना गरेका हुन । जनताले गरेको खबरदारीलाई इमान्दारीपूर्वक सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । कोरोनाको पीसीआर परिक्षण गर्ने सन्दर्भमै पनि सरकारले संसारका दश उत्कृष्ट देशमा पर्नेगरी काम गरेको छ । आजको अर्थ प्रणालीको ट्रेन भनेको चाहिँ बढिमा एक प्रतिशत माथि आर्थिक बृद्धिदर भनेर विश्व बैंक र एसियाली बैंकले भनेको छ । हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका छौं ७ प्रतिशतको वृद्धिदर, केहि भएरै त राखेको होला नी । किनभने हाम्रो त्यस्तो भौतिक पुर्वाधारको क्षति भएको छैन,मानविय क्षति पनि भएको छैन । केहि विकासका पूर्वाधारका कामहरु तीब्र गतिमा भएका थिए । कति एयरपोर्टहरु बनेका छन्, राजमार्ग निर्माण र बिस्तार हुने क्रम जारी छ । यद्यपी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकारका काम कमजोर देखिएका छन् । यसमा पनि अख्तियार आफैं सक्रिय छ, नियन्त्रण गरिरहेको छ । यसर्थ सुशासनको क्षेत्रमा प्रयत्न नगरेको भन्ने होइन । तर कसैले पनि छिपाउन चाहेरै नछिप्ने कुरा के हो भने सरकारले अहिले नै आम जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको भने होईन ।
पछिल्लो समय मन्त्रीमण्डल पुर्नगर्ठनको कुरा त करिब करिब निश्चित नै छ । कार्यदलले पनि दुईखालका विकल्प पेस गरेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । त्यो मध्ये तपाईलाई के लाग्छ ? यो मन्त्रीमण्डलको पुरै सेट परिवर्तन गरेर जाने हो या सामान्य फेरबदल ?
मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको कुरा हो । यद्यपी यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पार्टीले दिने सुझावको महत्व रहन्छ । यसबाहेक जनताले उठाएका प्रश्नको महत्व नहुने कुरा पनि भएन । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई क्याबिनेटबाट भएका कार्यसम्पादनले कत्तिको सन्तुष्ट बनाएको छ ? आफुले बनाएका योजनाहरु कति कार्यन्वयन भए वा भएनन्,समिक्षा गर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्छ । त्यसकारणले यसमा मैले अहिले नै केहि बोल्नेभन्दा यसको जिम्मा उहाँलाई नै छोडिदिउँ । तर म एक नागरिकको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने जनताले हामीलाई विश्वास गरैर दुईतिहाई मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो समय निक्कै राम्रो गनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । यद्यपि अलि अलि प्रश्न त उठेका छन् । यसकारण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो क्याविनेट पुरै नयाँपनसहित जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका थप लोकप्रिय कामहरुको घोषणा गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यसले राम्रो र नयाँपनको अनुभूति जनतालाई गराउँछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो ।
यो बिचमा पनि धेरैपटक मन्त्री आउने र जाने क्रम चल्यो , आउनेहरु त खुसी भए होलान् तर जानेहरुले आफुमाथि अपमान भएको सहि मुल्यांकन नभएको जस्ता टिप्पाणी गरेका थिए । जुन कुनै न कुनै रुपमा आलोचित पनि बनेको थियो । यहि अवस्थामा फेरि पनि मन्त्रीमण्डलको पुरै सेट परिवर्तन सम्भव छ ?
अहिले भएका सबै साथीहरुले पनि औसत काम गर्नुभएकै छ । खासमा हाम्रो विद्यमान जुन प्रणाली छ, यसअनुसार कसैले कामै नगरेको खत्तम भन्नुपर्ने अवस्था होइन । किनभने एउटै मन्त्रीले काम गर्नको निम्ती प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र अरु सम्बन्धित लाइन मिनिस्टरको समन्वय विना कसैले पनि मैले गर्छु वा गरेको छु भन्ने हुदैन । त्यसो भएर एभ्रेजमा सबैको हिसाब हामीले गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्मको समिक्षा गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने हो । जसले गर्दा मन्त्रीहरुलाई पनि अपमान हुँदैन । कसैलाई राख्ने कसैलाई नराख्ने यसले राम्रो काम ग¥यो त्यसले नराम्रो काम ग-यो भन्नुपर्ने देख्दिंन । तर मेरो सुझाव केहि नयाँपन आउने गरि अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । फेरी पनि यी सबैकुरामा हामीले दिने सुझाव वा सल्लाह मात्रै हो बाँकी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने कुरा हुन ।
मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको काम भयो भने तपाई आफु चाहिं नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने सम्भावना कति छ ?
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने र यसमा म सहभागी हुने वा नहुने यो मेरो कुरा होइन । म पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ । पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले पार्टीले जहाँ जे जिम्मेवारी दिएर निर्णय गर्छ, त्यसैलाई पालना गर्ने मेरो दायित्व हो । मैले यो गर्छु भनेर माग्दै हिड्ने कुरा पनि भएन । पार्टीले आवश्यकता ठान्यो भने त्यो भूमिकामा लैजान्छ । पार्टीले आवस्यकता नठानेको अवस्थामा अहिले जहाँ छु, त्यही ठिक पनि छ । यसको निर्णय गर्ने कुरा मेरो होइन, पार्टीले गर्ने निर्णय हो ।
तैपनि दुईतिहाई बहुमत सहितको सरकार छ । आम जनताको अपेक्षा असाध्यै बढि छ । यो सरकारमा आफू पुगे प्रधानमन्त्री वा पार्टीको योजना पुरा गर्ने सवालमा थप राम्रो नतिजा दिन सक्छु भन्ने लाग्दैन ?
मैंले यस्तो गर्थें उस्तो गर्थें भनेर गफ लाउनुु चाहिँ राम्रो हुँदैन । तपाईलाई थाहा छ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग देशको लागी केहि खास गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी छ । जनताले दुईतिहाई मत सहित विश्वास गरेर पठाएको पार्टी स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चीन्ता पनि सरकारले जनअपेक्षा पुरा गर्ने गरि काम गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले सोचेअनुसारकै टिम मिल्यो भने परम्परागत कार्यशैलीलाई ब्रेक गरेर नयाँपन सहित जादाँ अहिलेको स्थिती भन्दा पक्कै पनि बढि काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहीं अवश्य हो ।
समग्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अबको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ ?
अबको यात्रा भनेको समग्र जटिल समस्याको निकास दिंदै आम कार्यकर्ता र जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गचित्रमा अगाडी बढाउने बाटो नै नेकपाको बाटो हुनुपर्दछ । आन्तरिक पद र प्रतिष्ठाको खिचातानीमा होइन कि देश र जनतालाई बदल्ने अनि भारत र चीन जस्ता नजिकका छिमेकी मित्र राष्टसँगै नेपाल पनि कम छैन भनेर अगाडि बढाउने कुराको नेतृत्व नेकपाले गर्न सक्नुपर्दछ ।
नेकपा फुटिहाल्न लाग्यो भन्नेबेला ठ्याक्कै एकखालको सहमति भएर अगाडि बढ्दै छ । केहि महिनामा पार्टीभित्र फेरि यस्तै विवाद नआउने गरि अगाडि बढ्ने कुनै त्यस्तो सुत्र छ कि ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एउटा गतिशील नेतृत्व भएको पार्टी हो । पार्टीमा विवाद नै हुँदैन, छलफल–बहस नै हुँदैन भनेदेखि द्वन्दवाद बिरोधी हुन्छौं, हामी । हामीले त्यो दर्शनलाई मान्छौं । तर फेरि पनि देशप्रति जनताप्रति कार्यकर्ताप्रति इतिहासको आबश्यकताप्रति गम्भीर बन्यौं भने यस्ता छलफल, बहस र विवादले एकतालाई थप परिष्कृत र मजबूत बनाउँछ । त्यसकारण देश र जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कदम चालियो भने आन्तरिक समस्यालाई हल गरेर अगाडी बढ्न सक्छौं, त्यो नै अहिलेको मुख्य बिषय हो ।
हेर्नुहोस् पूरा भिडियो :